Yintoni efana nokuphila neDucati 1199 ePanigale?
Izinto ezintlanu ndazifunda ngokukhwela i-Italian superbike kwizitrato zedolophu
Emva kokuvavanya i-Ducati 1199 ePanigale kwi-Jasmine Circuit racetrack e-Abu Dhabi ehamba phambili kunye ne-Circuit ye-Circuit ye-Americas elandelwayo e-Austin, eTexas.
Njengoko unamandla kakhulu njengokuba uPanigale R no-S bebephantsi kwezo meko, ukugibela i-racetrack kusengumgcini omncinci wendawo apho abanikazi abaninzi banokukhwelisa khona iithuthuthu zabo.
Etsho, ndagqiba ukucela ukuba ndiboleke i-Panigale S yokusetyenziswa kwesitalato kwaye ndichithe iveki ekhwele ubuhle obomvu ezitratweni kunye neendlela ezihamba phambili zaseLos Angeles, ukuba ukhangele ukuba i-bike ibanjwe ngaphantsi kweendlela ezininzi zokusebenzisa izithuthi.
Nazi ezintlanu izinto endizifundileyo malunga neDucati 1199 ePanigale ukusuka kumava okuhamba ngesitalato.
Masikufumanise le ndlela: Ixabiso elingama-$ 22,995, i-Ducati 1199 iPanigale S yintengo ekhethileyo ephantse iphindwe kabini intengo ye-literacy yayo yaseJapan. Kodwa ngaphaya komqondiso omkhulu we dollar kunye ne-bally spec sheet, i-Panigale iyonke malunga nomnqweno, kwaye uhlala ukhunjuzwa ngalelo qho qho xa ubona i-look ye sibini-kwaye kaninzi, ukhangelele- kwabanye abakhweli.
I-Fleet, i-sculptural, kunye ne-muscular yonke kanye, le ntandokazi yaseNtaliyane iyimfuneko yokulahleka. Ukubeka eceleni iparameter yokusebenza ngokucacileyo, isibheno sesondo sisinye sezo zinto ongeke ubeke isamba se dollar, esiboleka uPanigale isakhono esiphezulu esilungeleyo esenza ukuba i-pedestal-fast-fast, ehamba ngokukhawuleza iithuthuthu ezisezantsi zibonakala zingekho ngokumataniswa.
I-Panigale ixhomekeke kwiindawo ezihlala kuyo: umzila. Ifoto © Milagro
Ngokuchasene nomlinganiselo omkhulu we-Formula 1 yomzila womzila, i-superbike esuka kwi-Ducati, makungabikho nanye nawaphandi abakhulu- Honda, Kawasaki, Yamaha , okanye Suzuki- ufika njengomshini onamandla onokukwazi ukutshisa i-tarmac nge-amazing ulwalamano.
Kodwa into yokuqala engayiboniyo ngokukhwela iPanigale kwiindlela zomphakathi kukuba ukuba ezoqoqosho zesikali zivuthwa kwiibitshi: ukuphucula umdlalo wezemidlalo ukukhawuleza kunye nokuyeka kwenza ukuba iziganeko zengqungquthela, izithuthi kunye nemithetho enokukwazi ukuvalela nto longweni. Eli bhasiki likhawuleza ukuya kuma-60 mph kakuhle phantsi kwemizuzwana emithathu, kwaye ithatha ixesha elingaphantsi ukujika iintloko kwaye ukhange ingqwalasela yenkcazo yakho yendawo.
Ngokuxhomekeke kwindlela ojonga ngayo, i-Duc's power-sharing capacity in the world of reality is awesome or scary-and in fact, in combination with a curious combination.
IPanigale engenakunzima. Ifoto © Ducati
Into engaqhelekanga eyenzekayo xa ukhwela e-Panigale: Awukwazi ukukholelwa ukuba ubukhulu bayo buhamba nebhayisiki ephethe imoto eyi-1,198cc. Umzimba webhayisikili unqabile, imilenze yakho iqhubela phambili kwimida ecwangcisiweyo; ukunyusa u-414 lb ubukhulu obujikelezileyo kwizwane zakho ezinama-tippy kwenza ukuba uzive ngathi ulinganisa isiqingatha kangangoko kufuneka; kunye nokuphakama kwesitulo esingama-intshi ezingama-32.48, isixa esiphezulu sinika inqaku elichasileyo lokuhlaselwa endleleni.
Nangona i-ergonomics yePanigale iphuculwe kakhulu ngaphezu kwe-1198 eyandulela ngaphambili, phantse nawaphi na umlinganiselo wokukhwela ngaphezulu kwemizuzu engama-20 iya kubakhokelela kwizikhwebu ze-numb and stretched spine. Yaye ngaphandle kokuba uhlaselwe ngokupheleleyo kuloo bhayisikiti yobuntu, awuyi kukhononda.
Kuya Kuya Kuza Kuya Kuza ... kunye Nomsindo
Ukukhethwa kweDucati, ukulandelela kuphela i-Termignoni ukukhupha. Ifoto © Ducati
Ngaba ndikhankanyile le bhayisikili ivule kakhulu?
Ukususela kumzuzwana loo majelo amakhulu ajika kwaye axoxe ebomini, okwesibini uyayiphonsa umphunga kwaye uzive ukhululekile, le bhayisiki ihamba njengento enamandla, ivuselela, iphile. I-bark yayo yokuzithuluka yenza ukuba uhlolwe kabini ukuze uqiniseke ukuba ayinakuxhotyiswa ngokuzikhethela, ngaphandle kweendlela kuphela i-Termignoni ukukhathala (okokuba, kwimeko yebhayisiki yam mboleko, yaba ngumbhobho wesitokisi.)
Nangona i-Ducati intshukumo yokhuselo lwe-2013 (enokuthi yenziwe ngokukhawuleza ngo-'12 abanikazi) iyabonakala, uya kuzifumana ngokukhawuleza ukuba amadolo akho asemasentimitha kuphela ukusuka kwezo zindonga ezinkulu. Ukusondela kwale mizuzu-i-reactors ye-thermal iyacaca emva kwemizuzu engama-20, kwaye i-degree eyi-1 iyatshisa ngokusuka emva kwayo. Ngokuqinisekileyo akukho nto umntu oya kuyifuna kwibhayisikili, akuvumelekanga ukunyamezela ukunikezelwa kwe-superthokes engenakwenziwa ngokungafaniyo ngeepennies kwi dollar. Kodwa xa ucinga ngesibheno sesini kunye nazo zonke ezo zorhwebo, iintsilelo ezivela kubu buhle bebhayisikili nazo ziba yinxenye yendalo yazo.
Kutheni Ukholelwa Xa Ukwazi Ukuhamba?
Imenyu ejulile kufuneka ibe nale ntengiso ye-TFT. Ifoto © Ducati
Bambalwa ukuba naziphi na izitrato zesitrato zanamuhla zinikela ubugorha beenkqubo ze-elektroniki njengeDucati Panigale, ngokukodwa iimodeli ze-S kunye ne-R kunye nokumiswa kwazo okwenziwe ngekhompyutha. Phakathi kokulawulwa kwezithuthi, i-injini ye-braking, i-ABS kunye nefomati yemodi yokukhwela, kukho iindlela ezaneleyo zokuqwalasela iPanigale ekhangelelwa kulowo mboniso we-TFT kwaye ukuguqula izicwangciso kunokuqala ukuzivelela njengomsebenzi wesikhundla. Kwaye kukuhle ukuba lo ngumntwana wakho kwaye ufuna ukuba usethe ngqo ngokufanelekileyo, kwaye ulungele ngokufanelekileyo endleleni.
Kum? Ewe, ndiphela nje ngePanigale ngeveki, ngoko ke ndichitha ixesha elincinane kwi-elektroniki kwaye ndagxininisa amandla ami ngokukhwela nje loo nto. Ekupheleni kosuku, asikho isizathu sokuba sonke size apha nangoko?
Iimvumi: Ii-Thieves Clone IiNkcazo zokungena eziNcinci zokuVulwa kweeNqwelo zeeMoto
Ukwahlukana phakathi kwegama elithi I and Me
Yiyiphi Intsimi epheleleyo?